Imfuneko kwimfundo yabantwana | Bezzia
Imfuneko kwimfundo yabantwana
UMaria Jose Roldan | 18/06/2022 12:31 | Fundisa abantwana
Nangona abazali abaninzi benokucinga ngendlela eyahlukileyo, imfuneko ekukhuliseni abantwana ayikhuthazwa kwaphela. Okufanelekileyo kukufikelela kumhlaba ophakathi, hayi kakhulu okanye omncinci kakhulu.
Kwinqaku elilandelayo sicacisa onke amathandabuzo onokuthi ube nawo malunga nemfuneko kwimfundo kunye indlela yokuyisebenzisa.
1 Yintoni efunekayo?
2 Kukweliphi inqanaba apho imfuneko igqalwa njengebaxiweyo?
3 Iiklasi zabazali ngokwemfuno enikiweyo
4 Xa kufuneka ube bhetyebhetye kubuzali
Undoqo kuyo yonke into kukwazi indlela yokusebenzisa imfuneko enjalo kwimfundo yabantwana abancinci. Ngokubanzi, imfuneko inokunceda umntwana enze izinto ngendlela efanelekileyo nefanelekileyo, kodwa ngamanye amaxesha imfuno enjalo inokuvelisa uxinzelelo olunamandla emntwaneni oluphela lumchaphazela ngokweemvakalelo. Yiyo loo nto kubaluleke ngokwenene ukulungelelana koko kufunekayo uze ufumane eyona mfundo isemgangathweni yabantwana.
Kukweliphi inqanaba apho imfuneko igqalwa njengebaxiweyo?
Imfuno igqithisa xa umntwana ecinezelekile kwaye uziva ebuhlungu ngokungafezekisi ukulindela okwenziwe. Imfuneko imele ibe nenjongo yokufundisa umntwana yaye ingamnyanzeli ngaphambi kwayo nantoni na ayenzayo. Iziphumo zokuba neemfuno ezigqithisileyo kubantwana zezi zilandelayo:
Uloyiko noloyiko lokuphoxa.
Iziphazamiso zokuziphatha kunye nokuziphatha.
Uxinzelelo kunye noxinzelelo.
Iingxaki ezinxulumene nabanye abantwana.
Iiklasi zabazali ngokwemfuno enikiweyo
Kukho iindidi ezintathu zabazali ngokweemfuno ezigqithisileyo ezibekwe kubantwana babo:
Okokuqala iya kuba ngabo baziwa njengabazali abangqongqo. Olu didi lwabazali luhlala lubhenela ekohlwayeni kwaye luqatha kakhulu xa kufikwa kwimfundo yabantwana babo. Basebenzisa ulawulo oluluqilima ngokufanelekileyo kubomi babantwana babo kwaye xa bejongene neempazamo kunye neempazamo bathanda ukunganyamezeli ngokupheleleyo kwaye bangaguquki.
Uhlobo lwesibini lwabazali ngabo balindele lukhulu. Balindele iziphumo ezigqwesileyo kubantwana babo ezithi maxa wambi zibonakale zingenakufikelelwa ngokwenene. Konke oku kuthetha ukuba izinga lokudakumba kwabantwana liphezulu kakhulu. kwaye rhoqo ukwenza phantsi koxinzelelo oluphezulu.
Udidi lwesithathu lwabazali lu-hypervigilant. Ngabo bahlala bebeka esweni abantwana babo kwaye babakhusele ngokugqithisileyo ngendlela yokuba bangakwazi ukuzimela kunye nokuzimela xa kuziwa ekusebenzeni. Olo lawulo nokhuseleko olugqithiseleyo ludla ngokuba nemiphumo emibi ekukhuleni kwabantwana ngokweemvakalelo.
Xa kufuneka ube bhetyebhetye kubuzali
Xa impelaveki ifika kufuneka wazi indlela yokupaka imfuno kunye yiba bhetyebhetye ngakumbi nabantwana.
Imfuno ayikhuthazwa xa abantwana besebancinane kakhulu.
Ukuba umntwana ubuthathaka kakhulu Kufuneka ube bhetyebhetye ngakumbi ngokuziphatha kwakho.
Akukho nto yenzekayo kuba abantwana bayazenza iimpazamo. Iimpazamo zibalulekile xa kufikwa ekufundiseni abantwana.
Awukwazi ukukhetha xa abantwana bayadlala okanye bonwabele ixesha labo lokukhululeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » Imfuneko kwimfundo yabantwana
I-Mugwort: inzuzo yayo enkulu yezempilo
Imiqadi eveziweyo yongeza umlinganiswa ekhitshini lakho